Global Voices teny Malagasy » “Niriko ho lehibe tao anatin’izany trano izany ny zafikeliko”: Fijoroana vavolombelona avy amin’ny renibe Syriana 61 taona avy ao Zamalka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Mey 2018 6:55 GMT 1	 · Mpanoratra Act For Ghouta Nandika (en) i Lara AlMalakeh, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fifindràmonina, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Sarin'ny tranony rava. Nalain'ny Lens of a Damascene Young Man.
Fijoroana vavolombelon'i Um Mohammed; vehivavy eo amin'ny 61 taona eo avy any Zamalka ity. Hita taratra eny amin'ny tarehiny ny hatsaram-panahin'i Um Mohammed miaraka amin'ny endriny toy ny zaza. Vao mainka miha-mena ny takolakany rehefa diso faly izy.
Mankafy hira fahiny i Um Mohammed ary mahatadidy vitsivitsy. Amin'ny maha renibe be fitiavana azy, tia ankizy kely izy ary afaka milalao miaraka amin'izy ireo mandritra ny ora maro.
Nipetraka tany Zamalka, tanàna any atsinanan'i Ghouta i Um Mohammed. Tombanana teo amin'ny 150.000 eo ny mponina tao tamin'ny fanisam-bahoaka farany.
Tafaporitsaka tamin'ny fifehezan'ny fitondrana i Zamalka tamin'ny taona 2012. Ka niharan'ny fahirano, niaraka tamin'ireo tanàna rehetra ao Ghouta Atsinanana nanomboka teo. Niharitra daroka baomba tsy an-kiato isan'andro i Zamlaka.
Ao anatin'ity fijoroana vavolombelona ity, miresaka momba ny tranony sy ny fianakaviany tao Zamalka ary ny fifandraisany tamin'izany trano izany sy ny entany i Um Mohammed noterena nafindra toerana:
Manan-janaka vavy telo sy lahy tokana aho. Niara-nijanona tamiko tao Ghouta ny zanako telo vavy, raha nandositra kosa ny zanako lahy fito taona lasa izay. Nanakana ahy tsy hanatrika ny fampakaram-badiny ny fahirano ary koa nanakana ahy tsy hahita ny fahaterahan'ny zanaka lahin'io zananilahy io.
Nipetraka tamin'ny tranom-pianakaviana aho. Trano tena antitra izay nolovan'ny vadiko tamin'ny rainy nandova izany tamin'ny rainy sy ny sisa. Taranaka nifadimby no lehibe tao amin'io trano io. Ireo izay mbola velona dia manana fahatsiarovana mahavariana amin'izany. Rehefa nandeha ny fotoana, dia nila fanavaozana ny trano, nanatontosa ny asa izahay no sady nazoto be tamin'izany mba hihazonana ny endriny tany am-piandohana. Te hitahiry ny fanahiny izahay.
Nandritra ny fahirano, nanjary vitsy ny fitaovana momba ny solika, na lafo be tsy mampino. Noho izany, tsy maintsy niantehitra tamin'ny hazo izahay mba haka hafanana, hahandro sakafo, mandro ary indraindray ho an'ny fahazavana (jiro).
Satria nihamafy nandritra ny dingana farany nanomboka tamin'ny volana febroary ny daroba baomba, nanjary tsy vita intsony ny nandao ny toerana ambanin'ny tany sy nivoaka nividy kitay. Nanamafy ny hatsiaka ny tsy fahampian'ny rivotra madio ao amin'ny toerana sy ny fahamandoana.
Indray andro tao amin'izany ambanin'ny tany izany, raha nandoro ny tanàna ny daroka baomba, tsy maintsy nampiasainay ny fitaovana manome hafanana. Tsy ho adinoko mandrakizay izany daroka baomba ratsy izay nandoro ny fahatsiarovanay sy ireo fahatsiarovana rehetra manodidina anay. Namafa ny marika rehetra momba anay tao Zamalka, tanindrazanay ny baomba, alohan'ny nisarahanay tanteraka
Farafara no fanaka voalohany nodoranay, noho ny hanoanana no nahatonga izany. Noana ireo zafikeliko, kanefa nanakana anay tsy hivoaka ny trano mba haka hazo ny fipoahana goavana. Na dia misy olona manao vivery ny ainy mivoaka any ivelany aza, tsy misy olona mivarotra zavatra azo avy amin'izany helo izany. Nangataka alalana tamiko ny vinantoko lahy mba hanapaka ny farafara hanaovana kitay hahandroana sakafo. Nanaiky aho, saingy nisy narary ihany ny tato anatiko.
Nitondra tantara mahafinaritra io farafara io. Nividy izany folo taona taorian'ny mariazinay ny vadiko. Faly be izy ka afaka nividy izany izahay. Niara naka izany izahay. Iray tamin'ireo fotoana vitsy nahafahanay niara-nivoaka niaraka tamin'ireo ankizy izany. Eny, mety azo haverina ny fananana ara-materialy, saingy ny fahatsiarovana miraikitra ao anatin'izany, ahoana no fomba hamerenana azy ireo?
Nihamafy ny fahoriana raha tsy maintsy nandoro ny fanaka rehetra tao amin'ny efitra fatoriako izahay. Niaraka tamiko nandritra ny 35 taona izany efitrano fatoriana izany, hatramin'izay nanambadiako. Nanatri-maso ny tsara indrindra sy ny andro ratsy indrindra teo amin'ny fiainako izany. Miraikitra eo ny fofon'ilay vady malalako efa maty. Zatra mifofona ny fanahiny miparitaka manodidina izany aho, izany no antony nahatsapako fa teo akaikiko izy isaky ny resin-tory aho.
Nodorako ny ankamaroan'ny akanjoko. Ohatra ny akanjo nanaovako tamin'ny mariazin'ny zanako vavimatoa. Tadidiko ny fiarahana taminy nankany amin'ny mpanjaitra ary nozairina tamin'izany ilay akanjo, niaraka amin'ny akanjo mariaziny. Ny akanjoko manokana, izay lasa akanjoko hatramin'ny naha-lehibe sy naha-lasa renibe ahy. Tsy nahavita nanavotra afa-tsy ny iray tamin'izy ireo ihany aho mba ho entiko miaraka amiko rehefa sendra voatery afindra toerana izahay.
Tamin'ireo fitaovana an-dakozia sisa navelan'ny daroba baomba, nodorako ireo plastika satria mora mirehitra ary nanome hafanana betsaka. Ny zava-dehibe dia misakafo sy mahatsapa mafana ny zanako sy ny zafikeliko.
Amin'ny fomban-drazanay, mandefa miaraka aminy fitoerana entana vita fitaratra ametrahana lovia sy fitaovam-pihinana tsara tarehy any amin'ny tranon'ny razazalahy ny fianakavian'ny ampakarina. Matetika mifandimby eo amin'ny taranaka rehetra izany fitoerana entana izany. Saingy rehefa vaky avokoa noho ny baomba ny fitaratra rehetra tao anatin'ny arimoarako, dia novakinay ilay fitoerany ary nampiasainay ho kitay mba hanaovana rano handroana.
Na izany aza anefa, ny toe-javatra sarotra indrindra tsy maintsy noreseko dia ny fanapahan-kevitra handoro ny arimoaran'ny zanako lahy. Zanako lahy, izay tsy hitako nandritra ny fito taona.
Nitazona fahatsiarovana mahafinaritra momba ny fahazazany izany arimoara izany. Ny kilalaony, ny akanjony tamin'izy zazakely, na ny kaopy tena tiany indrindra. Tsy vitako ny mitondra izany rehetra izany miaraka amiko amin'ny fiara fitaterana ho an'ny voatery afindra-toerana. Saingy tsy vitako koa ny manimba ireo fahatsiarovana ireo amin'ny tanako manokana; tsy vitako ihany koa ny mamela azy ireo ho an'ny olon-tsy fantatra mba holalaovin'izy ireo rehefa lasa izahay, na mahita azy ireo amin'ny horonan-tsary varotana eny an-dalambe. Tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra aho tamin'ny farany mba hamotika sy handoro azy ireo. Tsy nisy afa-tsy zavatra kely no azoko nentina niaraka amiko.
Izany no toe-javatra sarotra indrindra tamin'ny rehetra. Nanofy hatrany ny hanome ny fahatsiarovana momba azy ho an'ny zanako lahy aho, na mahita ny zanany lahy manao ny akanjony manokana rehefa amin'ny taonany, ary ny milaza ny tantaran'ny zafikely momba ny sarin'ny rainy.
Niriako ho lehibe tao amin'izany trano izany ny zafikeliko ka afaka milaza azy ireo ny tantara momba ny hafetsen'ny ray aman-drenin'izy ireo aho. Trano izay tiako hafindra amin'izy ireo ka ahafahan'izy ireo manome izany indray ho an'ny zafikelin'izy ireo, ka ahafahan'izy ireo manisy fiainana vaovao amin'izany isaky ny fotoana, tahaka ny nataon'ireo taranaka rehetra teo alohanay.
Tany amin'ny farany, tsy maintsy nandoro ny varavaran'ny trano izahay. Navela nidanadana, azo hidirana sy angalarana ny tranoko, ny tranom-pianakaviana, ny tranon'ny zanako.
Taorian'ny daroka baomba mahery vaika izay nampisehoan'ny fitondrana Syriana sy ny tafika Rosiana ny helo taminay, voatery tsy maintsy niala tao Zamalka toy ny mpitsoa-ponenana rava izahay. Sarotra taminay ny mbola hiaina eo ambanin'io fitondrana io. Fitondrana izay mahavita managadra ireo vinantoko lahy ary mitarika azy ireo amin'ny fanompoana ara-miaramila. Tsy vita indrindra indrindra ny mahafantatra fa tsy hiverina ao Zamlaka mandrakizay ny zanako lahy.
Namela ny tranom-pianakaviana sy ny fahatsiarovana rehetra tao anatin'izany aho. Nandao an'i Idlib niaraka tamin'ireo zanako vavy sy ny fianakaviany aho, nalahelo mafy. Ny zavatra iray nanome fampiononana ahy dia ny fihaonako tamin'ny zanako lahy izay efa tsy hitako nandritra ny fito taona ary nihazona ny zanany lahy teo an-tsandriko aho. Ny zavatra iray izay manome ahy fanantenana dia fantatro fa hambarako amin'ny zafikeliko ny momba ny raibeny, ny rainy ary ny tranom-pianakaviana miaraka amin'ireo fahatsiarovana rehetra tao anatiny.
Tamin'ny fihaonanay, nanome ny tahiry azoko nalaina tao amin'ny arimoarany ho an'ny zanako lahy aho. Tsy nety nino ny masony tany am-boalohany. Tsy nety nino izy fa nahavita nitondra izany sombim-pahatsiarovana momba azy izany aho. Tamin'izany fotoana izany, nivavaka ho an'ny zanako lahy aho mba hiverina eo anivon'ny tranom-pianakaviana, mba hanamboatra izany ary hitaiza ny zanany ao izy.
Miara-mipetraka amin'ny zanako lahy sy ny fianakaviany aho ankehitriny, mifindrafindra trano mandra-pahitanay toerana honenana vonjimaika, izay antenaiko fa tsy hisolo ny tranoko na oviana na oviana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/05/09/119092/